०१७ मा महेन्द्र–वीपीको टक्कर र ०७४ पछि ओलीको उदय- प्रचण्डसंगको टक्कर – Nepal Japan
नेपाल जापान ३० माघ १४:४३
खड्गप्रसाद ओली समकालीन विश्वमा कम्युनिष्ट आवरणका राष्ट्रवादी छवियुक्त चर्चित व्यक्तित्व हुन् । नेपालमा अहिले उनी ४१ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनलाई यो स्थानमा जनताको मतले पुर्याएको भनिन्छ । समस्या नभएको यो विश्वमा अहिले कुनै राष्ट्र छैन । यो समयमा नेपाल त झन समस्याले वेष्ठित राष्ट्र हो । विश्व मानचित्रमा अति प्राचीन राज्यमध्येको शीर्षस्थ स्थानमा हिमवतखण्ड अन्तर्गतको एक राज्य नेपाल वैदिक वाङ्मयको उद्भव स्थल हो । तर, अतीतको त्यो अवस्था अहिले छैन । सृष्टि संरचनामा शिवभूमि यो नेपालका हिमाली शृङ्खामध्ये अन्नपूर्ण शृङ्खलाबाटै सृष्टि क्रमका वीज–विजान यत्रतत्र छरिएको चर्चा वैदिक वाङ्मयले गर्छ । त्यस्तै वीजाक्षर मन्त्र र नीतिगत सिद्धान्तको प्रतिपादन यसै भूखण्डमा भएको मानिन्छ । अन्न नै ब्रह्म हो । “अन्न ब्रह्मा रसो, विष्णु भुक्ता देव महेश्वर” यो सूत्र यसैको प्रतीक छ । शिवको शाब्दिक र लाक्षणिक अर्थ हुन्छ ‘कल्याण’ ! सबैको कल्याण गर्नसक्ने यो भूमिको नाम ‘नेपाल’ ‘ने’ मुनिबाट पालित भएकोले ‘नयपाल’ र नेपाल भएको हो भन्ने एक मत छ ।
यही भूमिभित्र त्रेतायुग रामायणकालको अवशेषका रुपमा वाल्मीकि आश्रम छ । जहाँ सीताले निर्वासित जीवन बिताउँदै आफ्ना जुम्ल्याहा छोरा लब–कुशलाई जन्म दिएकी थिइन । यही आश्रममा बसेका वाल्मीकिले विश्वको प्रथम महाकाव्य रामायण रचना गरेका थिए । यसरी नै महाभारतकालका हुन् वा उत्तर महाभारतकालका राजा महाराजा भारतीय उपमहाद्वीपबाट उत्तरापन्थको यात्रा गर्दै नश्वर शरीरलाई विसर्जन गर्न नेपालतिरै आउँथे । भरत जस्ता चक्रवर्ति राजा हस्तिनापुरबाट कालीगण्डकीमा आएर आश्रम बनाइ तपस्या गरेको चर्चा श्रीमदभागवत महापुराणमा रोचक ढंगबाट वर्णित छ ।
यसरी नै कालीगण्डकीकै किनारमा जैमिनि जस्ता महर्षिले आश्रम बनाएर मीमांसा दर्शन प्रतिपादन गरे । द्रौपदीसहित पाण्डवहरुको उत्तरापन्थको यात्रा र कुकुरसहित स्वर्ग जान खोज्ने युधिष्ठिरको प्रसंग छ । तीर्थ, घाट, गिरिकन्दरामा साधनारत असंख्य योगी, महर्षि, स्वामीहरुको यो देशको सनातन संस्कृति, राष्ट्र–राष्ट्रियता सम्बद्र्धन, संरक्षणको कणकणमा योगदान छ । आर्य सभ्यताको अहिंसा परमोधर्मको सूत्रलाई व्याख्या गर्ने शान्तिदूताका रुपमा बुद्ध लुम्बिनीमा अवतिर्ण भएका थिए । यसरी शाश्वत सत्यको सनातन उर्जाले प्रदीप्त यो हिमवतखण्डको एउटा अति प्राचीन राज्य नेपालको चर्चा चारैयुग र कल्पकल्पमा विविध विधामा संरीक्षत रहेको थियो । मन्दिर संस्कृति होस् वा चैत्य, गुम्बा संस्कृति, पर्वत संस्कृति र नदी संस्कृति होस् कि वैदिक धर्म ओमकार परिवारको संस्कृतिको अजस्र स्रोत यही भूभागमा अझै छ । पुरातात्विक महत्वका यस्ता स्मारक र तत्तत् वाङ्मय, आख्यान–उपाख्यान प्राच्य ग्रन्थ भण्डारमा खचाखच छन् । स्मारहरु कति लोप भए, कति चोरिए । लेखाजोखै गर्न सकिंदैन– कालखण्डे उथलुथलमा प¥यो ।
टुक्रिंदै, खुम्चिदै संकीर्ण हुँदै भुरेटाकुरे राज्य बने । यस्तै कालक्रममा द्रव्य शाहले गुरु गोरखनाथको आशिरवादमा गोर्खा राज्य स्थापना गरे । रामशाहले न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने कीर्तिमान त्यही गोर्खाबाट कायम गरे । गोरखनाथकै आशिरवादमा पृथ्वीनारायण शाहले भुरेटाकुरे २२ से, २४ से राज्यलाई एकीकरण गर्ने अभियानन थाले । यरी वैदिक वाङ्मयले उल्लेख गरेको ‘नेपाल’ हिमाली अधिराज्य पुनः अस्तित्वमा विश्व मानचित्रमा शसक्त रुपमा खडा भयो । यसपछिको कालखण्डे इतिहास पनि उत्तिकै रोचक छ । कहिले उत्तरतिरको विशाल राष्ट्र चीन र कहिले दक्षिणतिरको छिमेकी राष्ट्र भारतसंगको द्वन्द्वमा आफ्नो अस्तित्व बचाउन र विश्वमानचित्रमा सशक्त उपस्थितिबोध गराउन सन्तुलित हुनु परेको पछिल्लो इतिहास छ ।
यसबीच यो शताब्दीमा प्रविधि र विज्ञानको चमत्कारले भूमण्डलीकरणको अर्को आयाममा नेपाल प्रवेश ग¥यो । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा युरोप र अमेरिका पनि अटेसमटेस गर्दै आफ्नो उपस्थिति बोध गराउने हेतुले आआफ्नो स्वार्थ रक्षार्थ प्रवेश गरे । नेपाल यी सबैको सामरिक स्वार्थरक्षाको खेलमैदान, बजार विस्तार र कूटनीतिक प्रयोगस्थलमा परिणत भयो । परिणाम यो मुलुक अहिले अस्तव्यस्त छ, रन्थमोलमा छ । जडौरी भिरेर कुरुप हुँदैछ । नीतिमध्ये अग्रणी राजनीति हो । राजनीति नै अपराधीकरण भएको छ । त्यसैकारण अन्य नीति– अर्थ, परराष्ट्र, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै दुर्गन्धित सडेगलेका कुडा–कर्कट थुपार्ने अनीतिका शिकार बने । त्यसमाथि आयातीत औपनिवेशिक शिक्षा र मानसिकता थपियो । पाँडे, थापा र बस्नेतहरुमा महत्वकांक्षा जगाएर पास्परिक भिडन्त पनि वितेको कालखण्डमा गराइयो । होनी–अनहोनी अकल्पनीय घटना घटे । यही कालमा च्याउ उम्रेजस्तै आईएनजीओ उम्रे । पार्टीतन्त्र खुब मौलियो । शास्त्र छोडेर शस्त्रको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने हिंस्रक मानसिकताले उत्प्रेरित ग¥यो ।
महेन्द्र र वीपी दुबैको भौतिक उपस्थिति अहिले नभए पनि वीपीको समाजवाद र महेन्द्रको राष्ट्रवादको खुबै चर्चा हुन्छ । कांग्रेसमा समाजवादको नाममै वीपीको नीतिगत प्रसंगको चर्चा गर्नेहरु वीपीको समाजवाद कहाँको उत्पत्ति हो भन्नेबारे अनभिज्ञ छन् । महेन्द्रको राष्ट्रवाद र सनातन प्राच्य परम्पराबारे अनभिज्ञहरु महेन्द्रलाई क्रुर तानाशाह भनेर निन्दा गर्नमै रमाउँछन् । त्यसैले महेन्द्र र वीपीको नीति निर्माणको स्रोत कहाँसम्म छ, कस्तो छ ? किन दुई व्यक्तित्वको टकराहट भयो र अन्तिम घडीमा वीपी मेलमिलापको प्रसंग उठाउँदै राजासंग किन घाँटी जोड्न आए ? यी सबै पक्ष अन्धाले हात्ती छामे जस्तै हुँदैछ । वीपी समर्थकहरुले गरेको समाजवादी अर्थतन्त्रको स्रोत कहाँको थियो र सुवर्ण शमशेर प्रभृत्ति अन्य कांग्रेसहरुकोा धारणा वा नीतिको स्रोत के हो र कहाँ थियो ? मातृका र सूर्यप्रसाद कहाँबाट संचालित कांग्रेस हुन् ? कहिल्यै ध्यान दिएर खोजी गरिएन । त्यस्तै पहिलो प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाएका मातृकाप्रसाद कोइराला र वीपीबीच सैद्धान्तिक कुन कुरामा मतभेद थियो ? योबारे पनि रहस्यको पर्दा अझै हटेको छैन ।
वीपीको समाजवाद युरोपियन समाजवादीका साथै भारतीय समाजवादी नेताहरुंगको सम्पर्क सूत्रमा आधारित थियो । सुवर्ण शमशेर लगायतका कांग्रेसीहरुको युरोपियन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पूँजीवादका पक्षधरसंग घनिष्ठता थियो । मातृकाप्रसाद लगायतका अन्य व्यक्तिहरु भारतीय नेतासंग खासगरी नेहरु डक्ट्रिनसंग सामिप्य कायम गरेर राजनीतिको रथमा सवार थिए । अहिलेका देउवा प्रभृत्ति कांग्रेसीहरु युरोपियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी नवउदारवादका समर्थनमा प्रजातान्त्रिक नेताको रुपमा स्थाििपत छन् । युरोपपियन समाजवाद स्रोतमै शक्तिहीन हुँदैगएकोले वीपीको समाजवादी धार कुपोषणले पीडित बच्चा जस्तै लिखुरे भयो । रामशरण महत प्रभृत्ति पश्चिमा सुगाहरु वीपी समाजवादको घेराबाट बाहिर निस्किए । नवउदारवादी युरोपियन बहुराष्ट्रिय कम्पनीका गोटीका रुपमा उभिए– सत्ता सुख भोगे । नवउदारवादको नारा घन्काउँदै युरोपियन पूँजीवादलाई मलजल पु¥याएकोमा प्रशंसित भए, पुरस्कृत भए । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतीय संस्थापन पक्षका कांग्रेसीहरुले उचाले । कृष्णपसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह घर न घाटका भए । ‘कोटका काजी न घाटका माझी’ उखानको चरितार्थ गर्दै गिरिजाको व्यक्तित्व अगाडि ‘फादर अफ डेमोक्रेसी’को साथै ‘सर्वमान्य नेता गणेशमान सिह’ र ‘सन्त नेता’को पगरी गुथेका कृष्णप्रसाद भट्टराई निरीह बने । परंधाम गए । अकल्पनीय दरबार हत्याकाण्ड भयो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराइयो ।
पृथ्वीनारायण शाहले स्वतन्त्रताको शंखनाद गर्दै राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान थाल्दा गोरखनाथलाई गुरु थापेका थिए । शास्त्रसम्मत शासन गर्ने अठोट गरेका थिए । शास्त्र नै शासनको पर्यायवाची शब्द मानियो । २० वर्षमा राजा भएका उनले ३ दशकको शासनकालमा जति गरे त्यति कुनै शासक वा राजाले गरेको अभिलेख छैन । विधिको विधान अनुरुप सृष्टि संरचना चल्छ भन्ने प्राच्य अवधारणा अनुरुप महेन्द्रले पंचायत व्यवस्थाको प्रयोग गरेका थिए । वीपीसंग उनको टकरावको कारण वीपी युरोपियन सोसियलिष्टहरुको विचार वा सिद्धान्त अनुरुप शासन गर्न र पाश्चात्य शैलीमै राजतन्त्र वा राजा रहोस् भन्ने चाहन्थे ।
सुवर्ण शमशेर प्रभृत्ति कांग्रेसीहरु युरोपमा झैं पूँजीवादी ढंगको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न चाहन्थे । कतै पनि नलागी असंलग्न नीति अनुकरण गरेर महेन्द्र प्राच्य परम्पराअनुरुप स्वतन्त्र हिमवतखण्डको स्रोत भूमिकै रुपमा नेपाल रहोस् भन्ने लक्ष्य–उद्देश्यमा सक्रिय भए । २०१७ सालदेखि ०२७ सालको १० वर्षमा उनले जति काम गरे त्यति काम गर्ने विश्वमा अन्य कुनै नेता छैनन् र हुँदैनन् । राजा वीरेन्द्र कांग्रेसको नजरमा महेन्द्रजति निषेधात्मक व्यक्तित्व नहुनुमा युरोपियन पूँजीवादीको दृष्टिकोण पनि एक हो ।
पाश्चात्य शिक्षा लिएका र पूँजीवादी प्रजातन्त्रको अभ्यास देखेका उनीमा लोकैषणाको मानसिकता थियो तापनि तत्कालीन भारतीय नीति निर्माता र शाससंग उनको खटपट थियो । अकल्पनीय घटनापछि राजसिंहासनमा आरुढ गराइएका राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना पिता महेन्द्र र जिजुबराजु पृथ्वीनारायणले जस्तै इतिहास रचने सुरले कदम चाल्न खोज्दा दक्षिणतिरबाट यरोप केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको हुरिमा परे । दशौंहजार आईएनजओ लगायत क्रिश्चियन धर्ममा धर्मान्तर गराउने नियोजित योजना अनुरुप विश्वमानचित्रमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र र संघीयताको अस्पष्ट मोडलमा मुलुक गयो । अहिले घनचक्करमा परेको छ । दलदलमा फसेको छ ।
(२०७४ सालमा ओली प्रधानमन्त्री चयन भएपछि लेखिएको यो आलेख अहिले सान्दर्भिक रहेकाले पुनः मुद्रित गरिएको हो)